Vitamin C လိမ်းရင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ | OnDoctor
Vitamin C လိမ်းရင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ
” ညီမလေးရေ… အမမျက်နှာကို ကြည့်ပါဦး.. အမဲစက်တွေ တင်းတိတ်တွေထွက်လာလို့… အမအရမ်းစိတ်ညစ်တာပဲ..”
ဟုတ်ပါရဲ့… နဂိုအသားဖြူနုနေတဲ့သူဆိုတော့.. ခုတင်းတိတ်တွေလို ထွက်လာတော့ တော်တော်စိတ်ညစ်နေရှာမှာ.. အသားတွေလဲပက်လို့..
” အမပြမယ် ညီမလေးရေ ဒီမှာဒီမှာ”… သူမနေ့စဉ်လိမ်းနေကျ skincare နဲ့ မိတ်ကပ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုထုတ်လာတယ်..
ကဲ..တွေ့ပါပြီ အဓိက တရားခံ Vitamin C…
Vitamin C serum လေး…
“၂ပါတ်လောက်ရှိပြီ ညီမလေးရယ်..Vitamin C က အသားရည် ကြည်တယ်.. အမည်းစက်တွေ ပျောက်တယ်ဆိုလို့ အမလိမ်းနေတာ..”
” အဲ့ Vitamin C serum တစ်မျိုးပဲ အမလိမ်းနေတာ..တခြားတောင် ဘာမှ မလိမ်းဖြစ်ဘူး”
ကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဆီမှာ Suncream လဲမတွေ့တာနဲ့..
“အမ Suncream တို့ ဘာတို့ရောမလိမ်းဘူးလား?”
“ခုကဆောင်းအကုန်လေးဆိုတော့ နေလဲမပူတာနဲ့ အမမလိုဘူးထင်ပြီး မလိမ်းဖြစ်ဘူး”
ကဲ..တော်တော်ကြီးကို လွဲနေပါပြီ အမရေ..
“အမရေ..Vitamin C ဆိုတာ အသားရေအတွက် အမပြောသလို တကယ်ကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲ.. ဒါပေမဲ့လေ သူတစ်မျိုးထဲ လိမ်းလို့မရဘူး အမရဲ့”
“ဟုတ်တယ် အမ.. သူက အသားရေကို ကြည်စေတယ်၊ အမည်းစက်တွေကို ပျောက်စေတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ.. ဒါပေမဲ့ Vitamin C ကို သူတစ်မျိုးထဲ မလိမ်းသင့်ဘူးရှင့်.. သူက ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်သော vitamin ( water soluble vitamin ) ဆိုတော့ အမလိမ်းလိုက်တာနဲ့ အသားရေထဲ တစ်ခါထဲ စိမ့်ဝင်သွားပြီး အပေါ်ယံ အရေပြားကိုတော့ ခြောက်စေတယ်.. အဲ့ဒါကြောင့် အမ အသားရေခြောက်နေတာ..”
” Vitamin C လိမ်းရင် တွဲလိမ်းပေးရတာရှိတာ်အမရဲ့. တစ်ခုကတော့ Collagen ပေါ့.. Vitamin C က Collagen ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးတော့ သူတို့ နှစ်ခုကတွဲလိမ်းရင် ပိုအားကောင်းတာပေါ့.. နောက်တစ်ခုက အပေါ်မှာပြောသလို Vitamin C က အသားရေကို ခြောက်စေတော့ အပေါ်က moisturizer တစ်ခုခုလိမ်းပေးဖို့လိုတယ်.. အကောင်းဆုံးကတော့ Vitamin E ပဲ.. vitamin E ပါတဲ့ moisturizer ကို vitamin C သုံးတိုင်း လိမ်းပေးသင့်တယ်.. vitamin C က vitamin E ရဲ့ အသားရေပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုအားပေးတယ်လေ.. ၂ မျိုးပေါင်းပြီး Synergy effect ကိုရတာပေါ့..”
“အဲဒါဆို အမည်းစက်တွေ သက်သာသွားမှာလား??”
“No မဟုတ်သေးဘူးအမရဲ့..အမည်းစက်တွေ တင်းတိတ်တွေ မဖြစ်အောင်က အမ suncream လိမ်းဖို့လိုတာ..Vitamin C လိမ်းရင် ပိုတောင် suncare ကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်.. Vitamin C လိမ်းရင် နေလောင်တာ ပုံမှန်ထက် ပိုလွယ်တာမလို့ Suncream ကောင်းကောင်းလေး SPF နံပါတ်မြင့်တာ၊ PA + များတာမျိုးကို သေချာသုံးပေးသင့်တယ်.. အဲ့ဒါကြောင့် ညီမဆို Vitamin C serum ကို ညဖက်မှာပဲ ပိုသုံးဖြစ်တယ်အမရေ..”
“အမက နေသိပ်မပြင်းတော့ နေလောင်ကာလိမ်းဆေး မလိုဘူးထင်နေတာ”
” မဟုတ်ဘူးအမရေ..မိုးအုံ့နေရင်တောင် UVA /UVB rays တွေက လေထုထဲမှာ ရှိနေတာမလို့ suncream တော့ သေချာ သုံးပေးဖို့လိုတယ်ရှင့်..”
“ဟယ် ဒါဆိုအမတော်တော်လွဲနေတာပဲ ကျေးဇူးနော်”…
ကဲ အားလုံးပဲ Vitamin C လိမ်းရင် ဘာတွေဆောင် ဘာတွေရှောင်ရမယ်ဆိုတာ သိသွားပြီ ထင်ပါတယ်နာ်..